ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု(Genocide) ဆီ ဦးတည်နေပြီလား ...
ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းလိုလိုမှာ လူမျိုး၊ဘာသာ၊နိုင်ငံသား၊အသားအရောင်၊လိင် စတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အခြေပြုပြီး ငါတို့နဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ '' Us and Them'' ခွဲခြားမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ရန်၊ ငါ စည်းခြားတယ်လို့လဲ ဆိုနိုင်တာပေါ့။ ငါတို့ ဂျာမာန်တွေ၊ သူတို့က ဂျူးတွေ၊ ငါတို့က ဟူတူတွေ၊ သူတို့က တွတ်စီတွေ စသည်ဖြင့် လူလူချင်းအမျိုးအစားခွဲခြားလိုက်ခြင်း (Classification) ဟာ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အစမှတ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရောယှက်နေသော ဆက်နွယ်မှုတွေရှိမနေတဲ့ လူမျိုးစုနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဓိကစွမ်းအားကတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုကျော်လွန် သွားတဲ့၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနဲ့ နားလည်မှုတွေကို တိုးပွားစေတဲ့၊ ပိုင်းခြားမှုတွေကို ကျော်သွားတဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကိုသာအားပေးတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့၊ အဆောက်အအုံတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို့ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းက ဘုံရပ်တည်ချက်တွေကို မဖြစ်မနေရှာဖွေလာရပြီး ... အဲဒီ့အချက်ကိုက လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အဓိကစွမ်းအားဖြစ်လာပါတယ်။ အရိုးဆုံး နဲ့ အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေများများလုပ်ပြီး အချင်းချင်းနွယ်ယှက်နေသော အကျိုးစီးပွားတွေ များများရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ကြဖို့ပါ။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (Classification) ဟာ အမျိုးအစားခွဲခြားထားရုံနဲ့တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိသေး ပါဘူး။ သူ့နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာတဲ့ ... အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (Symbolization) ကြောင့် အခြေအနေတွေက ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ အုပ်စုတစ်ခုခုက အခြားအုပ်စုတစ်ခုခုကို အမည်နာမတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်ပါတယ်။
အသားအရောင်ကိုလိုက်ပြီးဖြစ်စေ၊ အဝတ်အစားကိုလိုက်ပြီး ဖြစ်စေ၊ မတူညီသော ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လိုက်ပြီးဖြစ်စေ အခြားသူများကို အုပ်စုတစ်စုထဲ သွတ်သွင်းလိုက်ပြီး ... သူတို့ဟာ ဂျူးတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ ဂျစ်ပစီတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ နီဂရိုးတွေပဲ စသည်ဖြင့် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ... ခွဲခြားမှုဟာပိုပြီး ပီပြင်ထင်ရှားလာပါတယ်။ နာဇီတွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလက ဂျူးတိုင်းကို အ၀ါရောင်ကြယ်ပုံတံဆိပ်တပ်ခိုင်းထားတာမျိုး၊ ကမ္ဘောဒီယားမှာ ခမာနီတွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလက အရှေ့ပိုင်းဇုံမှာရှိတဲ့ လူတွေကိုအပြာရောင်လည်စည်းစီးပေးထားတာမျိုးတွေ ဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောသွားပြီးဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနဲ့ အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း နှစ်ခုဟာ လူသားတွေလုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးတွေလုပ်ဆောင်ခြင်း (Dehumanization) ဆိုတဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို ဦးမတည်သေးသရွေ့တော့ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းတစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အမည်အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းတွေ ပပျောက်ဖို့ကတော့ မုန်းတီးမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတတွေကို တရားဥပဒေအရကို တားမြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဂိုဏ်းကဏ္ဍတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုလဲ ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိတာက ဥပဒေအရကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်းတွေဟာ လူကြိုက်များနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအင်အားတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမရတဲ့ အခါ အရာမထင်တတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ... ဟူတူ၊ တွတ်စီ စတဲ့စကားလုံးတွေဟာ ... ၁၉၈၀ခုနှစ်အထိ ရဝမ်ဒါဘာသာစကားအရ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားပေမယ့် ... အများကလက်ခံသုံးစွဲ ခဲ့တာကြောင့် အတည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်း (Dehumanization) ဖြစ်စဉ်ကတော့ အားကြီးတဲ့ အုပ်စုက အားနည်းတဲ့ အုပ်စုရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ငြင်းဆန်ချင်လာရာကနေ စပါတယ်။ အမျိုးအစား ခွဲခြားပြီး အမည်တံဆိပ်တစ်ခုခုတပ်လိုက်တဲ့ အစုအဖွဲ့လေးတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ရောဂါသည်တွေ၊ အဆင့်နိမ့်သူတွေ နဲ့ တတန်းတစားတည်းထားလိုက်ပြီး ... လူသားအဖြစ်ကနေ ယုတ်လျော့သူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ လူဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းဟာ ... သာမာန်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေထက် အများကြီးပိုဆိုးပါတယ်။ အဲဒီ့အဆင့်မှာဆိုရင် ... အမုန်းတရားကိုတိုးပွားစေတဲ့ ၊ ဒေါသကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဝါဒဖြန့်စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အသံလွှင့်မှုတွေကို ခပ်များများသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ... လူထုအနေနဲ့ မြင်ရကြားရသမျှတွေဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တွေကိုဦးတည်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေလား၊ အမှန်တကယ် လူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုစိတ်နဲ့ ပြောတာတွေလားဆိုတာကို ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ... လှုံ့ဆော်မှုတွေကို တန်ပြန်ချေဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့ စည်းစနစ်ကျသော၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်သော ကာကွယ်မှု၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအားနည်း တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုတွေ တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ အမုန်းတရားတိုးပွားစေသော ဝါဒဖြန့်မှုတွေကို အမြန်ဆုံးတားမြစ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမုန်းတရားနဲ့ ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းစတဲ့ အဆင့်တွေနောက် မှာတော့ မိမိတို့ မဟုတ်သော အခြားအုပ်စုကို နှိပ်ကွပ်ဖျက်သိမ်းပစ်လိုတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုက ... နောက်လာမယ့်အဆင့်တွေကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ... အခိုင်အမာဖွဲ့စည်းခြင်း (Organization) ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ပါတော့တယ်။ များသောအားဖြင့် ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်(သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက စုစည်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန် ဖို့အတွက် တိုက်ခိုက်ရေးအစုအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ပေးတာမျိုး၊ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာမျိုးတွေ ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် အစီအစဉ်ကို စနစ်တကျရေးဆွဲပါတယ်။ ဒီလိုအဆင့်မျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ... အဲဒီ့လိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီး တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုများခွဲထုတ်ခြင်း (Polarization) လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့ ... အစွန်းရောက်တွေက အမုန်းတရားကို တိုးပွားစေတဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုသုံးပြီး အုပ်စုတွေအများကြီးဖြစ်အောင်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ... လူမျိုးခြားမယူရ၊ လူမျိုးခြားနှင့်မဆက်ဆံရ စတဲ့ ဥပဒေတွေတောင်ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါတယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ ... ကြားအမြင်ရှိသူတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ... ကြားအမြင်ရှိသူတွေကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အစွန်းမရောက်သော သမာသမတ်ကျတဲ့အမြင်မျိုးတွေကို များများပြန့်နှံ့စေခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားဖြင့် ... အစွန်းရောက်အမြင်တွေကနေ ကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ ... ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကို သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အကြောင်းပြု ခွဲခြားရွေးထုတ်(Identification)ပြီး သတ်ဖြတ်ရမယ့် စာရင်းကိုပါ ရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံကြရတော့မယ့် လူအုပ်စုဟာ တံဆိပ်တစ်ခုခုကပ်ခံရတာမျိုး၊ တစ်နေရာရာကို အတင်းပို့ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ နာဇီတွေဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကို ... ချွေးတပ်စခန်းတွေဆီပို့တာမျိုး၊ ဂတ်တိုလို့ခေါ်တဲ့ သီးခြားရပ်ကွက်တွေဆီပို့တာမျိုး၊ စားနပ်ရိက္ခာခေါင်းပါးပြီး ငတ်ပြတ်သေသွားနိုင်တဲ့ နေရာတွေဆီ အင်အားသုံးပို့ဆောင်တာမျိုးတွေဟာခွဲခြားရွေးထုတ်ခြင်း (Identification) ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဟာလျှင်လျှင်မြန်မြန်တရားဝင် စတင်လာပါတော့တယ် ...။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို သတ်ဖြတ်သူတွေဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်သားကောင်တွေကို လူအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့တာကြောင့် အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း (Extermination) လို့အမည်တပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လိုအဖြစ်အပျက်မှာ ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေဘက်က ရှိတဲ့အားနဲ့ ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း သံသရာထဲကို ကျရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ ... (Denial) လို့ခေါ်တဲ့ ငြင်းပယ်ဖုံးကွယ်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ အပြီးမှာ ကျူးလွန်သူတွေတိုင်းလိုလိုပြုလုပ်တတ် ကြတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေရဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓာတွေကို ကျင်းကြီးတွေတူးပြီး မြှုတ်နှံခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း၊ အထောက်အထားတွေကို ဖြောက်ဖျက်ခြင်း၊ မျက်မြင်သက်သေများအား ခြိမ်းခြောက်နှုတ်ပိတ်ခြင်း တွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ... သူတို့ဟာ သူတို့တွေ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆန်တတ်ကြပြီး ... အမြဲလိုလို အကျူးလွန်ခံရသူတွေအပေါ် ပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ ကျူးလွန်သူအများစုဟာ ... ပြဿနာကိုအမြဲရှောင်လွှဲပြီး အခြားသူတွေအပေါ်ပုံချဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ... လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဆီ ဦးတည်သွားနိုင်လား ...။ ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကျနော်တို့တွေဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ အထက်မှာရေးထားတဲ့ အဆင့်တွေထဲက ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာလေးကို အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူ့ကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းပစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ကြောင်း သေချာစေဖို့ ကျနော်တို့တွေ အခြားလူမျိုးတွေကို မုန်းတီးပြနေဖို့လဲ မလိုပါဘူး။ အခုလောလောဆယ် ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ပုံမှားယွင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြဿနာရဲ့ အချိန်ကြာမြင့်လာပြီး အခြားသောဒေသတွေကိုပါ ပြန့်ပွားဆိုးဝါးလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု(Genocide) ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ... မြန်မာနိုင်ငံသား အမြောက်အများသေကြေပျက်စီးခြင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သိက္ခာကျပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တွေအားလုံး ဘာပဲလုပ်လုပ် ... ကိုယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုဟာ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်တစ်ခုခုဆီတွန်းပို့နေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်နေမလား၊ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်မကျရောက် အောင် ကာကွယ်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးလားဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ။ ပြီးတော့ ... ကိုယ်ရေးသမျှ၊ ကိုယ်ပြောသမျှ၊ အွန်းလိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်တင်သမျှတွေကိုလည်း တာဝန်ယူတတ်ကြပါစေ။
Gregory H.Stanton, President, Genocide Watch ရဲ့ 8 Stages Of Genocide ကို ကိုးကားပါသည်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, June 13, 2012
တရားဥပဒေနဲ့ အညီ အိမ်ရှင် ၊ ဧည့်သည် စည်းကမ်းများနဲပ နေထိုင်ကြရင် ပြဿနာများ ပြေလည်သွားမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ် ။
June 14, 2012 at 2:39 AM
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ... လှုံ့ဆော်မှုတွေကို တန်ပြန်ချေဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့ စည်းစနစ်ကျသော၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်သော ကာကွယ်မှု၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအားနည်း တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုတွေ တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ အမုန်းတရားတိုးပွားစေသော ဝါဒဖြန့်မှုတွေကို အမြန်ဆုံးတားမြစ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမုန်းတရားနဲ့ ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုတွေ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကိုနေဖုန်းလတ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အင်တာနက်ပေါ်မှာ ယခု ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ လတ်လွတ်စပယ်ပြောတာတွေ ဆဲဆိုတာတွေတွေ့ရတာ အပြင် မီဒီယာတစ်ချို့ကပါ ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်သယောင်ယောင်တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းနည်း စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ သမိုင်းကိုများများလေ့လာခိုင်းရမယ်။ စာအုပ်စာပေများများဖတ်ခိုင်းရမယ်။ အခုလို ဘလော့ဂ်လောက မှာ ထင်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီဟာကိုထောက်ပြတာ အမုန်းတရားပွားတဲ့ လှုံဆော်မှုေ တွနေ့စဉ်နီးပါးမြင်တွေ့နေရလို့ စိတ်ပျက်မိသူကျွန်တော့်အတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင်တစ်ခုပါပဲ။
Min Koko said...
ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကို များများ ရေးပေးနိုင်ပါစေ.....
အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် အလယ်အလတ်ကျကျ တင်ပြသွားနိုင်လို့ပါ၊ တချို့နာမည်ကြီး(ပြည်တွင်း) မီဒီယာတွေထက်တောင် အဆင်အတန်းရှိရှိ တင်ပြသွားပါတယ်။ လေးစားပါတယ်၊ တာဝန်၊သိက္ခာ၊ကျင့်ဝတ်၊ စတာတွေကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတချို့ စံတန်ဖိုးတွေ တက်လာစေချင်ပါသည်။
လူတွေ နှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့ ချစ်တတ်ကြဖို့၊ သဘောထားအမြင်ကျယ်ပြီး ခွင့်လွတ်တတ်ကြဖို့ ကျွန်မတို့ စံနမူနာကောင်းပြပြီး ကြိုးစားရမှာ ပေါ့နော်။
လက်တွေ့ကြတဲ့ အမြင်မို့ နှစ်သက်စွာ ဖတ်သွားပါတယ်၊ ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးနဲ့ပက်သတ်ပြီး ရေးကြ၊ ဆဲကြ၊ ကွန်မန့်တွေပေးကြတာတွေဖတ်ပြီး မတင်မကျ ခံစားနေရတာ၊ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ နဲနဲသက်သာသွားသလိုပဲ။ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆကို လေးစားပါတယ်။ ပြန်မျှဝေပါရစေ။
The best post ever for me.
Khin Mg said...
ဘော(လ)ဂါ နေဘုန်းလတ်ကို လေးစားပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရခိုင်အရေးမှာ အချင်း နာမည်ခင်ပွန်းတပ်ပြီးစွပ်စွဲတာ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ တိုင်းရင်းသား စသဖြင့် မသိ၊ နားမလည်း မလေ့လာဘဲနဲ့၊ လူမျိုးစုငယ်တစု၏ သမိုင်းနောက်ကြောင်းကို မျှမျှတတ သုတေသန မပြုလုပ်ဘဲ မတရားတဖက်ဆောင့် ကိုယ့်ထင်ရာအမှန်ထင်ပြီး ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုမှုဆက်ဆံလာတော့ အခုလိုမျိုးမလိုလားအပ်သောဖြစ်ရပ်မျိုးရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
agga Personal said...
သူငယ်ချင်းရေ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်၊ ဗမာနိုင်ငံအေးချမ်းစေဘို့နဲ့ ဗမာလူမျိုးဂုဏ်တက်စေတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာလူမျိုးများရဲ့ စိတ်သဘေားထားကြီးမြတ်တဲ့ အစဉ်အလာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးလေး ကောင်းပါတယ်...မြန်မာ နိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး သိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်..လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုနေဘုန်းလတ်အမြင်မပြည့်စုံတာလား ချန်ခဲ့တာလား...တစုံတခုအကျိုးအတွက် မျှားခေါ်သွားတာလား ဆိုတာမသိပေမယ့်....ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ... ဘယ်တိုင်းပြည်..ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဆို အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးကို တနည်းနည်းနဲ့ ကာကွယ်ထားကြပါတယ်...ခု ရခိုင်အရေးမှာ အမျိုးသား ကာကွယ်မှု ကို ယဉ်ကျေးစွာ ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်သင့်လဲဆိုတာမပါပဲ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ပေတံကြီးနဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင်တချို့ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ၂၁ ရာစုစီမံကိန်းကြီးကို မြန်မာတွေ ကာကွယ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလား ။ ကမ္ဘာမှာ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးတစု ကို တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆော်ဒီအပါ အာရပ်ကမ္ဘာ ။ မလေး။အင်ဒို။အိန္ဒိယ နဲ့ကမ္ဘာအသီသီးမှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ သန်းပေါင်းများစွာကိုပါ မြန်မာက လက်ခံပေးရတော့မယ်ထင်တယ်...မြန်မာပြည်မှာ ပွားများနှုန်းကိုလဲနဲနဲလောက် လေ့လာကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ် ။မြန်မာပြည်မှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတင်ကျန်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးခြားတစုနဲ့ နောက်ပိုင်းခိုးဝင်လာသူတစုပူးပေါင်းပြီး အင်အားကြီးမားမှု့ကိုတည်ဆောက်ပြီး ..မြန်မာစကားလဲမသင်..မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလဲနဲနဲမှအပ်စပ်အောင်မကြိုးစားပဲ....ပါကစ္စတန်ဂျီနားဗား....ပါကစ္စတန် ဂျီနားဗား ဆိုပြီးကြွေးကြော်နေကြတာကို မြန်မာတွေ ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေရမလား... အကြံလေးပေးပါအုံး...(ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲ) ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ပွားများလာပုံ ကြံစည်ချက်တွေ သေသေချာချာလေ့လာကြည့်ပါအုံး....မြန်မာ ပြည်ဟာ လူမျိုးနဲ့ဘာသာကို ကမ္ဘာနိုင်ငံများစွာထက်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်...တိုင်းပြည်ဆင်းရဲလွန်းလှ ပြီး ဒီိမိုကရေစီပန်းတိုင်သို့မရောက်သေးလို့သာ သိသာစွာမမြင်ပဲ အမြင်လွဲမှားမှုတွေ နဲနဲရှိနေတာပါ...မြန်မာပြည်က မြို့ရွာတိုင်းမှာ ချမ်းသာနေတဲ့ ပညာတတ်နေတဲ့ လူတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါ....နိုင်ငံရေးသမားတွေ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ အာဏာလုနေကြရတဲ့အချိန်မှာ တာဝန်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အရှေ့အနောက် အမျိုးသား ကာကွယ်မှုထဲက အနောက်တံခါးကို ရခိုင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်မှုကို အင်္လကာတွေတတ်ကျွမ်းတဲ့ ဘလောကာသမားတွေက ရိုက်ချိုး မဖျက်မိပါစေနဲ့လို့ အထူးအကြံပေးချင်ပါတယ်........ .လေစားစွားဖြင့်
THANK YOU KO NAY PHONE LATT.
ATHEK SHAY PAR ZAY.
SAW MAUNG said...
KO NAY PHONE LATT;
nwayhlaing thoone said...
ဒီနေရာမှာ အမေစုရဲ့ စကားလေး ငှားသုံးပါရစေ ။ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေလည်း အမေစုရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လက်ခံထားကြတာပဲလေ ။လူကောင်း၊လူဆိုး....လူတော်၊လူညံ့...ရယ်လို့ အယုံအကြည် မရှိပါဘူး ။ပြင်လို့ရတဲ့လူနဲ့ ပြင်လို့ မရတဲ့လူ ဆိုတာပဲ အဆင့်အတန်း ၂ ခုသာရှိပါတယ်။ ဟိုးရှေးယခင်ကနေ အခုချိန်ထိ ဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာများ ထူးထူးကဲကဲ ကြားမိတယ်မထင်ပါဘူး ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ...။အဓိက အကျဆုံးကတော့ ဥပဒေပါပဲ။ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံခြားသားကို နိုင်ငံသားထက် မျက်နှာသာပေး၊ အခွင့်အရေးပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသာ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ချည်းပဲလားလို့ ပြန်ကြည့်ကြပါဦး...။ဒီလိုမျိုး တရားလက်လွတ် လောလောဆယ် သာနေရင် ပြီးရော ဆိုတာတွေနဲ့ ပြည်သူ့ဘဝ နစ်နာလှပါပြီ...။ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကိုတော့ အခုထိ ပြေလည်အောင် (ဖြေရှင်းလို့ရပါလျက်၊ဖြေရှင်းနိုင်ပါလျက်)မဖြေရှင်းကြဘူး။သူတို့အလိုကျ လိုက်လျောပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် မစင်တုံးခွေးနိုင်သလို လုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ Driver အနေနဲ့ထား၊အကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိပဲ နိုင်ငံသားအဖြစ် အတုလုပ်ပေး၊ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အတွက် ကောင်းကျိုးဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ပေးပါပဲနဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ခေါ်သွင်း........ဆိုတော့.......ကျနော်တို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကိုယ်နေပြီး ဘာကို အားကိုးရမလဲ။ပြောချင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။မင်းတို့က အခုထိလည်း အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကို အကောင်းမမြင်နိုင်ကြသေးဘူးလို့....။အမှန်ပါပဲ...။အစိုးရဟာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပြည်သူတိုင်းအတွက် ယုံကြည်မှုပေးဖို့ အင်မတန်ဝန်လေးစေတဲ့ ဖြစ်ရပ်၊ပြဿနာတွေဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှာ လက်ရှိသက်သေတွေပါပဲ...။အခု ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာဟာလည်း နောက်ကွယ်က Driver သို့မဟုတ် Source ကို မဖော်နိုင်သရွှေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အေးဖွယ်မမြင်ပါဘူး...။နောက်ပြီး ဥပဒေအရ အိမ်ရှင် ...ဧည့်သည်...ဆိုတာ တာဝန်ယူမှုနဲ့ အခွင့်အရေး ဆိုတာတွေကို တိတိကျကျ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားရင် ပြဿနာတက်စရာ မရှိပါဘူး။မလိုက်နာတဲ့သူကိုပဲ ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးရုံပေါ့..။ နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်တော့ ဥပဒေပါပဲဗျာ...အခုချိန်ထိ အဲဒါကိုပဲ လိုသလို ကစားနေကြတုန်းပဲ မဟုတ်လား...။
ွှThet Naing Oo said...
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကိုနေဘုန်းလတ် blog ကိုအခုမှဖတ်ဖူးတယ်။ဆောင်းပါးတွေကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို.လူမျိုးတွေဘယ်ကိစ္စမဆို စိတ်ခံစားမှုနဲ.ချည်းပဲ မကြည့်သင့်တော့ဘုး။ပြသနာတိုင်းရဲ.အဖြေကိုသေချာရှာသင့်ပြီ။အတိတ်ကအားနည်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်သင့်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနေဘုန်းလတ်။စာကောင်းတွေများများရေးနိုင်ပါစေ။
It is very good.I wishes you that
more you can write and all Myanmar's
Pyae thuu more can read such as.....,
ကျနော်ဒီ Blog ကိုဝင်ဖတ်နေတာ ၁ လ လောက်ရှိနေပါပြီး။ အကောင်းမြင်ပြီးအထင်အမြင်ပေးတာရော၊ မနာလိုမုန်းတီးစိတ်ကြီးစွာနဲ့ ကိုယ်အမှန်ထင်ရာကိုတဘက်စွန့်အောင်ရေးနေတာတွေရော့ ဖတ်မိပါတယ်။ ဒီကနေ့ကျနော်အမြင်လေးနဲ့နဲ့ရေးသားဖေါ်ပြပါရစေ။ ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကို ကျနော်က July လကစပြီး မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမာသမိုင်း၊ webside မျိုးစုံလင်စွာရှာဖွယ်တွေရှိချက်အရ (ရခိုင်နှင့်ရိုဟင်ဂျာ) ဒီလူမျိုး ၂ မျိုးအချင်းချင်းယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့တာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကစခဲ့ကြောင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘက်မှပြောဆိုချက်အရ သူတို့သည် ထိုနေရာသို့ အေဒီ ၇ ရာစု ကစပြီး တဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုလိုက်သော်လည်းကောင်း အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ၁၄ ရာစု မှ ၁၆ ရာစုထိ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရခိုင်နိုင်ငံဧ။်နိုင်ငံတော် ရာထူးကြီးငယ်များကို နောင်တော် ရခိုင်လူမျိုးနဲ့အတူထမ်းဆောင်းပြီး နိုင်ငံအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင့် သမိုင်းအထောက်အထားများနဲ့တကွ ပြောဆိုလာကြသည်။ နောက်တဘက်မှာ ရိုဟင်ဂျာတို့နဲ့ဆန့်ကျင်းဖက်အဆိုတွေမြင်တွေ့နေရတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးများနဲ့ မဆလအစိုးရအဆက်ဆက်အစိုးရများက ကျုရိုဟင်ဂျာဟူသောနာမည်သည် ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းမှစတင်ဖေါ်ပေါက်လာကြောင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှစတင်ပြီးယနေ့ထိုင်တံခါးမရှိဓါးမရှိအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာကြသောလူများဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ ပြောဆိုနေကြသည်။ သည်လိုအခြေအနေအထားမျိုးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လို့သုံးသပ်သင့်သလဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေတင်ပြလာသလို သူတို့သည် ၇ ရာစုကပင် ထိုဒေသတွင်ရောက်ရှိလာကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကမျက်စီမှိတ်ပြီးယုံကြည်လက်ခံပြီး တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ယင် မူလနေရခိုင်လူမျိုးများအတွက်သာမက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် နစ်နာစရာကောင်းပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေတင်ပြလာတာတွေကို မစိစစ်ဘဲ ရခိုင်လူမျိုးများနဲ့ မဆလ အစိုးရအဆက်ဆက်က ပြောဆိုစွပ်စွဲချက်အတိုင်းမျက်စိမှိတ်ပြီးလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုလိုရှိယင်လည်း တကယ်လို့မျှ ထိုရိုဟင်ဂျာများသည် ရခိုင်လူမျိုးနှင့်အစိုးရတို့စွပ်စွဲချက်အတိုင်းမဟုတ်ခဲ့သော်....ဒီနေရာမှာ ဒီအချက် ၂ ချက်အပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်သင့်သလဲ။ ပြသနာရဲ့မူလဇတ်မြစ်ကို အရင်ဆုံးရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရမယ်။ ရခိုင်သမိုင်းကိုသေသေချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှာဖွေလေ့လာရမယ်။ ဖုံကွယ်ရာထဲ့ကဖေါ်ထုတ်ရမယ်။ လက်လှမ်းမမှိအောင်ကန့်သတ်ထားတဲ့စည်းကိုကျော်ပြီးရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရမယ်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲပြည်တွင်းမှာတဘက်သတ် ရေးသားထုတ်ဝေရေးသားချက်ထဲ့က ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲမျှ တရားမျှတစွာဖေါ်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လို့သတ်မှတ်ပြီး တပြေးညီ ချစ်ခင်သူပါ ဆိုလို
ချင်ပါ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ဒုက္ခသည်တွေကိုစာနာပါတယ် ဒါပေမယ့်ရခိုင်အပါအ၀င်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါး
လက်မခံပါ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြသနာ
ကအမှန်ကိုမသိရသေးခြင်းပါ တကယ့်အခြေအနေမှန်နဲ့ လက်ရှိကိစ္စတွေကို
များကိုသိခွင့်ပေးပါ လို့ လေးစားစွာတောင်းဆိုပါတယ်
ကိုနေရေ ကျေးဇူးပါ့့
လူကို လူလို့ပဲ မြင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
Dear Ko Latt,
The door to your cell has opened, the lights have been turned on, but still there is darkness in the open prison of the land called Burma. But in the darkness you arearay of light. Human Rights isaway of life driven by compassion; enshrined in our speech, actions, thoughts and understanding. You areatrue Buddhist. May the brightness of your light always illuminate the dark cells of those who do not follow the middle way; those who seek to destroy the dignity of other living beings. Thank you for beingaguiding light in the darkness.
Your unknown sister.
အ၇မ်းအရမ်းကိုခံစား၇တယ်ဗျာ..ရေလည်ကြွေသွားတယ်ပေါ့....လူကိုလူလိုမြင်ဘို့ကအရေးကြီးပါတယ်...ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင်သီချင်းထဲမှာလဲ ပါတယ်လေ...အဲဒါထက် ပိုအရေးကြီးတာက ခွေးကို လူလို့မမြင်မိဘို့ဘဲဗျ...ဟုတ်တယ်ဟုတ်(ဂျက်မြသောင်း)၊
August 18, 2012 at 4:01 AM
Really good one..i appreciated..it
June pkt said...
Hello ko nay phone latt. I amapure Burmese Buddhist. Just wish to let you know thatI share the same sentiments frm the beginning of the whole conflict. I hope that more people frm our nation can be broadminded and rational as you. A good read and glad to know that there are others who support you too.
ta khar mha bal thu. ko mha coment ma pay phuu buu,dblog ko phat pee tot ayann sate hlote shar twar lo. myat yay tg lae mi par dal, ayann asoon ma yout pae lu ko lu lo. myin naing par say lo. lae arr lone atwat sanda pyu par dal.
thu ka tot christian mo lo. thu ka tot muslim mo. lo. so pee apyat chay hmone lite mal so tae lat shi myanmar mhar ako. lo sate dad myo nae lu lae shi tay tal so tot budda bar thar win so tar ko bal naing ngan yout yout wint kywar lo. ya twar kya p
lu xoe said...
သဘောထားချင်း တူညီသဖြင့် ရှယ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးပါ။
Compare LIC's New Endowment Plan with other insurance plans & buy. Check details of LIC new endowment plan, benefits, eligibility, etc.